January | 2010 | Dr Chit Nge (Philosophy) Ph.D, London
Philosophy and Myself
Posted on January 31, 2010 by chitnge
စာရေးသူနှင့်ဒဿနပညာ စာရေးသူသည် ဒဿနပညာကို မြတ်နိုးလေသည်၊ စိတ်ပညာတို့ ဒဿနပညာတို့ အပါအဝင် ဖြစ်လေသည်။ ဒဿနပညာမှာ Philosophy Philosophy ဆိုတာကတော့ ပုဒ်ခွဲလိုက်ရင် ဖီလော်ဆော်ဖီးယား (ဂရိလို)၊ တကယ်တော့ ဖီလော် ဆိုတာက ချစ်မြတ်နိုးခြင်းပါပဲ၊ Love ပါ၊ Wisdomဆိုတာက ပညာရှိခြင်းပေါ့၊ အဲဒီတော့ ပညာရှိခြင်းကို ချစ်မြတ်နိုးဖို့ဆိုတော့ စာရေးသူမှာ အဆိုပါဘာသာရပ်ကို သဘောကျသွားမိလေသည်။ ထို့ကြောင့် ကိုယ်သဘောကျပြီး လေ့လာပြီးတဲ့နောက်မှ ကိုယ်က ကိုယ့်စာဖတ် ပရိတ်သတ်ကို တင်ပြမယ်၊ ဒီတော့ ကိုယ်အရင်တတ်အောင် လုပ်မယ်ဆိုပြီး ဒီ … Continue reading →
Posted in Buddhism, Frontpage	| Tagged Buddhism, Myanmar Posts, နိဗ္ဗာန်, ပါရမီ, သာသနာ, အတ္တ	| Leaveacomment
IBC Seminar – Day 1 Audio
Posted on January 29, 2010 by chitnge
Venue : International Business Center (IBC) Date/Time : 15th Jan 2010 (09hr to 12hr) IBC Audio File 1 IBC Audio File2IBC Audio File3IBC Audio File4IBC Audio File5IBC Audio File6IBC Audio … Continue reading →
Posted in Audio, Frontpage, Seminars	| Leaveacomment
သာသနာချစ်သူများ အချင်းချင်းချစ်ကြပါ အခမ်းအနားအပြည့်အစုံ
သာသနာချစ်သူများ အချင်းချင်းချစ်ကြပါ ဟောပြောပွဲ အခမ်းအနား အခမ်းအနားအစီအစဉ် အပြည့်အစုံမှာ … အခမ်းအနား အစီစဉ် (၁) အခမ်းအနားမှူး ဒေါက်တာမေသက်မာလာမှ အခမ်းအနား စတင်ကြောင်း ကြေညာသည်။ အခမ်းအနား အစီစဉ် (၂) အခမ်းအနားမှူး ဒေါက်တာမေသက်မာလာမှ ဗုဒ္ဓစာပေဆုရ စာရေးဆရာကြီး ဒေါက်တာချစ်ငယ်(ဒဿန) ၏ ကိုယ်ရေးရာဇ၀င်ကို ဖတ်ကြားသည်။ အခမ်းအနား အစီစဉ် (၃) ဗုဒ္ဓစာပေဆုရ စာရေးဆရာကြီး ဒေါက်တာချစ်ငယ်(ဒဿန) မှ “သာသနာချစ်သူများ အချင်းချင်းချစ်ကြပါ” ခေါင်းစဉ်ဖြင့် ဟောကြားသည်။ အဆိုပါ ဟောကြားချက် အချို့မှာ … Continue reading →
Posted in Buddhism, Frontpage, Seminars	| Tagged ၀ိပဿနာ, Buddhism, Myanmar Posts, နိဗ္ဗာန်, မဂ်ဉာဏ်၊ ဖိုလ်ဉာဏ်, သာသနာ, လောကုတ္တရာ	| Leaveacomment
သာသနာချစ်သူများ အချင်းချင်းချစ်ကြပါ ဟောပြောပွဲ အခမ်းအနား
သာသနာချစ်သူများ အချင်းချင်းချစ်ကြပါ ဟောပြောပွဲ အခမ်းအနား အဆိုပါ အခမ်းအနားကို (၆) မိုင်ခွဲ ပြည်လမ်းရှိ International Business Centre (IBC) တွင် ၂၀၁၀ ခုနှစ် ဇန္န၀ါရီလ (၂၇) ရက်နေ့တွင် ဗုဒ္ဓစာပေဆုရ စာရေးဆရာကြီး ဒေါက်တာချစ်ငယ် (ဒဿန) မှ ဘုန်းရောင်ဂျာနယ် အမှတ်စဉ် (၅၁) ပါ “သာသနာ ချစ်သူများ အချင်းချင်းချစ်ကြပါ” ဆောင်းပါး အကြောင်းအရာနှင့် ပတ်သက်၍ ဟောပြောပွဲကို နံနက် (၉) နာရီမှ (၁၂) နာရီအထိ … Continue reading →
Posted in Buddhism, Frontpage, Seminars	| Tagged Buddhism, Myanmar Posts, သာသနာ	| Leaveacomment
My Opinion on Science – 2
သိပ္ပံပညာအပေါ်သဘောထား အပိုင်း(၂) အိုင်းစတိုင်း၏စကားများ စောစောကဖော်ပြခဲ့သော ”THE FUNDAMENTS OF THEORETICAL PHYSICS (page-261)” စာစုတွင်၌ဖြစ်သည်။ အိုင်းစတိုင်းသည် အောက်ပါအတိုင်း ဖော်ပြခဲ့သည်။ ”Some physicists, among them myself, can not believe that we must abandon, actually and forever, the idea of direct representation of physical reality in space and … Continue reading →
Posted in Buddhism & Science, Frontpage	| Tagged Science	| Leaveacomment
Please click on the title to open the Video. No tags for this post.
Posted in Frontpage, Video	|2Comments
Posted on January 25, 2010 by chitnge
Posted in Frontpage, Video	| Leaveacomment
Please click on the title to open the Video. Tags: Nibbana
Posted in Frontpage, Video	| Tagged Nibbana	| Leaveacomment
Posted on January 21, 2010 by chitnge
အနတ္တဥာဏ်နှင့် ပတ်သက်၍ ဟောပြောပွဲ ခေါင်းစဉ် : အနတ္တဥာဏ်နှင့် ပတ်သက်၍ ဟောကြားသူ : ဒေါက်တာချစ်ငယ်(ဒဿန) နေရာ : International Business Centre (IBC) (၆)မိုင်ခွဲ၊ ပြည်လမ်း၊ ရန်ကုန်မြို့ နေ့ရက် : ၂၀၁၀ ခုနှစ်၊ ဇန္န၀ါရီလ၊ (၂၀) ရက်နေ့ အချိန် : နံနက် (၉) နာရီမှ (၁၂) နာရီ။ အဆိုပါ ဟောပြောပွဲကို နံနက် (၉) နာရီမှ စတင်ကျင်းပခဲ့ရာ အခမ်းအနားအစီအစဉ်အရ … Continue reading →
Posted in Buddhism, Frontpage	| Tagged Buddhism, Myanmar Posts, ကမ္ဘာ, နိဗ္ဗာန်, မဂ်ဉာဏ်၊ ဖိုလ်ဉာဏ်, အတ္တ, လောကုတ္တရာ	| 1 Comment
Posted on January 18, 2010 by chitnge
သိပ္ပံပညာအပေါ်သဘောထား အပိုင်း(၁) သိပ္ပံပညာရှင်များ၏သာကွက်နှင့်ဟာကွက်များ အိုင်းစတိုင်းသည် တချိန်က ဤသို့ရေးသားခဲ့ဖူးသည် – A human being is part of the whole, called by us ‘Universe’; လူဆိုတာ စကြဝဠာကြီး တစ်ခုလုံးရဲ့ အစိတ်ပိုင်းတစ်ခုပါပဲ။apart limited in time and space. လူမှာတော့ အချိန်ကာလနဲ့ ဌာနသတ်မှတ်မှုဆိုတာ ရှိတာပေါ့။ တနည်းအားဖြင့် သက်တမ်းဆိုတာ ရှိတာပေါ့။ He experiences … Continue reading →
Posted in Buddhism & Science, Frontpage	| Tagged Buddhism, Science, အတ္တ	| Leaveacomment
Posted on January 16, 2010 by chitnge
မှန်ကန်သောလမ်းညွှန်ချက် ကျွန်ုပ်၌ဆရာရှိသည် ကျွန်ုပ်နာခံကျင့်ကြံသည်။ ထို့ကြောင့် ကျွန်ုပ် အောင်မြင် ပေါက်မြောက်သည်။ စာရေးသူ၌ ဆရာကောင်းဆရာမြတ် ရှိခဲ့သည်။ ဤအခွင့်အရေးသည် လွန်စွာမှ ကြီးကျယ်သော အရေးပါသော အခွင့်အရေးတစ်ခုဖြစ်သည်။ ပုဂ္ဂိုလ်တော်တော် များများ၌ ဆရာကောင်းဆရာမြတ်များ မရှိကြ၊ ဝမ်းနည်းဖွယ်ရာ ကောင်းသည်။ သူတို့သည် ငါဆရာ လုပ်နေကြသည်။ ငါ့ထက်တော်သောဆရာ မရှိရဟူသောသဘော မြင်နေကြသည်။ စိတ်မကောင်းစရာ ဖြစ်သည်။ အမှန်တော့မူ ဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်ပါက ဆရာကောင်း သမားကောင်းက အသိပညာ လက်ဆင့်ကမ်းရရိုး ထုံးစံရှိသည်။ ထိုထုံးစံကိုပင် မသိကြဘဲ ငါတကော,ကောနေကြသော ပုဂ္ဂိုလ်များသည် … Continue reading →
Posted in Buddhism, Frontpage	| Tagged Buddhism, Myanmar Posts, မဂ်ဉာဏ်၊ ဖိုလ်ဉာဏ်, အတ္တ	|3Comments
“ မှန်ကန်သောလမ်းညွှန်ချက် ´´ဟောပြောပွဲ အခမ်းအနား (IBC)
“ မှန်ကန်သောလမ်းညွှန်ချက် ´´ ဟောပြောပွဲ အခမ်းအနား ဗုဒ္ဓစာပေဆုရ စာရေးဆရာကြီး ဒေါက်တာချစ်ငယ် (ဒဿန)သည် ဘုန်းရောင်ဂျာနယ် အမှတ်စဉ် (၄၉) ပါ ဆောင်းပါး “မှန်ကန်သောလမ်းညွှန်ချက်´´ ဟောပြောပွဲ အခမ်းအနားကို ၆မိုင်ခွဲ၊ ပြည်လမ်းရှိ International Business Center (IBC) တွင် ကျင်းပရာ မဂ္ဂဇင်း၊ ဂျာနယ် အသီးသီးမှ ဖိတ်ကြားထားသော စာရေး ဆရာများ၊ စိတ်ပါဝင်စားသော သံဃာတော်များ၊ စာဖတ် ပရိသတ်များ နှင့် ဖိတ်ကြားထားသော ဧည့်သည်တော်များ စုံလင်စွာ တက်ရောက်ကြသည်။ … Continue reading →
Posted in Buddhism, Frontpage, Seminars	| Leaveacomment
Ultimate Triumph of Human Intellect
Posted on January 12, 2010 by chitnge
Ultimate Triumph of Human Intellect May be this age is Scientific age or this is the age of Science. Scientific knowledge is rather advanced and it can givealot of contributions concerning worldly affairs, social feeling…etc. So, we may … Continue reading →
The Conqueror of Ego
Posted on January 10, 2010 by chitnge
The Conqueror of Ego The Conqueror of Ego means the conqueror of sexual dealings. Actually, Human beings are slaved to sexual desires. However, as we’ve the reasoning power, we can be the master of sexual feelings. This means that we … Continue reading →
Posted in Buddhism, Frontpage	| Tagged Buddhism, Vipassana	| Leaveacomment